Kidnapping : roa lahy voasambotry ny CME | NewsMada
Kidnapping : roa lahy voasambotry ny CME
Ny 14 jona 2018 teo, voasambotry ny avy ao amin’ny « Cellule Mixte d’Enquête » na CME, itambaran’ny zandarimaria sy ny polisy miandraikitra ny ady amin’ny fakana an-keriny, teny Ambohimangakely, ny lehilahy miisa roa izay efa zatra niditra am-ponja tamina raharaha maro samy hafa. Voatonona ary voarohirohy tamin’ny raharaha fakàna an-keriny ilay lehilahy indianina, ny 24 mai teny Ampasampito, izy ireo.
Noho ny fidirana lalindalina tamin’ny fanadihadiana efa natao teo aloha ka nahavoatana am-ponja vonjy maika ny lehilahy miisa roa tamin’ny 11 jona lasa teo, nametraka vela-pandrika ireo mpanao fanadihadiana avy ao amin’ny CME hisamborana ireo lehilahy miisa roa voatonona ho isan’ny nandray anjara mivantana tamin’ny fakana an-keriny voalaza io. Teny Ambohimalaza izy roa lahy ireo no hita ka nosamborina avy hatrany niarahana tamin’ny zandary mpanao « Police de la route » eny an-toerana ary tratra soa aman-tsara.
Vokatry ny fanadihadiana natao azy ireo izay niaikeny fa mpanao fanafihana sy asan-jiolahy izy ireo, niampy ny porofo isan-karazany nentina teo amin’ny fitsaràna, tafiditra am-ponja vonjy maika eny Tsiafahy izy ireo, ny alatsinainy teo, taorian’ny fiatrehany ny Fampanoavana.
“Ny asa iandraiketan’ireo mpanao fanadihadiana ao anatin’io vondrona io, mandeha araka ny tokony ho izy raha tsy hijery afa-tsy ny isan’ny olona tafiditra am-ponja vonjy maika ihany izay miisa 23 hatramin’ny volana aogositra 2017 nananganana azy”, hoy ny fanazavana. “Misy ny resaka milaza fa tsy misy ny fandraisan’andraikitr’izy ireo ka tsara ny mahalala fa mbola miasa ary miasa amin’ny herin’ny tenany sy ny fahaiza-manaony manokana izy ireo na tsy misy aza ny fiaraha-miasa eo amin’ireo fianakavian’ny niharam-boina sy ireo ao amin’ny vondron’ny teratany frantsay avy any Inde monina eto Madagasikara na CFOIM”, hoy ny zandary.